Izindatshana zikaPeter Arvai Martech Zone |
Imibhalo nge UPeter Arvai
UPeter uyi-CEO ye Prezi, isoftware yezethulo esebenzisana nayo, ayisungula ngonyaka ka-2008 no-Adam Somlai-Fischer noPéter Halácsy, umakhi wezakhiwo kanye nomqambi, njengendlela yokwakha indlela ekhumbulekayo futhi ehehayo yokuthi abantu babelane ngezindaba. Ngaphambi kokusungula i-Prezi, uPeter wasungula i-omvard.se, okuyinkampani ehlanganisa imininingwane ngemiphumela yokwelashwa kweziguli zasesibhedlela, kanye nokwenza umqambi wezindaba wokuqala omakhalekhukhwini emhlabeni ukuze abantu bakwazi ukulandela i-TED Talks besebenzisa amaselula abo.
Izethulo Zezentengiso zeSayensi Ebangela Ukuzibandakanya, Ekhumbulekayo Neshukumisayo
NgoMsombuluko, Juni 20, 2016 UPeter Arvai
Abathengisi bazi kangcono kunanoma ngubani ukubaluleka kokuxhumana okusebenzayo. Nganoma yimiphi imizamo yokumaketha, inhloso ukuletha umlayezo kuzethameli zakho ngendlela ezibandakanya zona, ezinamathele ezingqondweni zazo, futhi ezincenge ukuba zithathe isinyathelo-futhi kunjalo nanganoma yiluphi uhlobo lwesethulo. Noma ngabe wakha ideski leqembu lakho lokuthengisa, ucela isabelomali kubaphathi abaphezulu, noma usungule igama eliyisihluthulelo lokwakha uphawu lwengqungquthela enkulu, udinga